Zimbabwe Yokurudzirwa Kudzidzisa Vechidiki Dambudziko reHIV/AIDS
Nyanzvi munyaya dzeHIV/AIDS dzinoti Zimbabwe inofanirwa kusunga dzisimbe mukudzidzisa vechidiki nyaya dzeHIV/AIDS.
Izvi zvinotevera ongororo yakabudiswa neUNAIDS svondo rapera inoratidza kuti kunyange hazvo ndufu dzine chekuita neHIV/AIDS dziri kuderera kubva mugore ra2005, vechidiki vari pakati pemakore gumi nemashanu nemakore makumi maviri nemana vari kusarira munyaya dzekuongororwa ropa nekuwana mishanga yeHIV/AIDS.
Ongororo iyi inoti munyika dzakadai se Zimbabwe, Zambia neMalawi, chidimbu chevechidiki munyika idzi, havazivi mamiriro eropa ravo, uye vane hutachiwana havasi kuwana mishonga.
Imwe nyanzvi munyaya dzeHIV/AIDs, Amai MuchanyaraMukamuri, vanoti vana vari pakati pemakore gumi nemashanu kusvika pamakumi maviri nemana vanonyanya kuvavarirakudzivirira pamuviri pane kudzivirira zvirwere zvepabonde.
Amai Mukamuri vakurudzira vabereki kuti vakurukure zvepabonde nevechidiki ava sezvo vazhinji vavo vachiita zvepabonde.
Amai Mukamuri vatiwo zvakakosha kuti vedzisvondo vaparidzirewo shoko rekuongororwa ropa kune vechidiki, sezvo vechidiki vari kuita zvepabonde vasati varoorana.
Vanokokera zvirongwa zveHIV/AIDS muGweru, VaMurari Hwingwiri, vatiwo nyaya yekusarurwa ndoinokonzera vechidiki vazhinji kuti vasade kunoongororwa ropa.
VaHwingwiri vakurudzirawo vechidiki kuti vaongorerwe ropa nguva nenguva. VaHwingwiri vati vechidiki vanofanirwa kutora mikana wekuvapo kwemishonga yeAnti retroviral Therapy kuti vaongororwe votanga mishonga nguva ichiripo.
Munyori mubazi rezveutano, Doctor Gerald Gwinji, vati zvakakosha kuti zvirongwa zveHIV/AIDS zviumbwe nenzira dzinoita kuti vechidiki vasunumguke kuwana zvirongwa izvi.
VaGwinji vatiwo bazi rezveutano rakatotanga zvirongwa zvekuti vechidiki vakurukure zvavanoda uye zvinovabatsira mukurwisa HIV/AIDS.
Dr Gwinji vatiwo vechidiki kunyanya vanasikana vanoda kupiwa masimba kuti vakwanise kuzvimiririra mukuchengetedza hutano hwavo.